Universal Online TV | कुल निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा नेपालमा निर्यात गर्दै आएका छौं कुल निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा नेपालमा निर्यात गर्दै आएका छौं
कुल निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा नेपालमा निर्यात गर्दै आएका छौं
२० वर्ष भारतीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पीहरूको सेल्स अनुभव हासिल गरेका गोदरेज एप्लाएन्सेस्का एक्स्पोर्ट सेल्स प्रमुख सलाम सोनामनी लुवांग नेपालमा गोदरेजको बजार विस्तार हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । गोदरेजभन्दा अगाडि एलजीको सेल्स एक्स्पोर्ट प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव रहेका उनी नेपालमा विद्युतीय उपकरणको बजार बढ्दो अवस्थामा रहेको तथा नेपाल भारतका लागि महत्वपूर्ण बजार रहेको पनि बताउँछन् । उनै सलामसँग कारोबारले विद्युतीय उपकरणको बजार, नेपालमा गोदरेजको सम्भावनालगायत विविध विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा गोदरेजको बजार र प्रभाव कस्तो रहेको छ ?
नेपाल, भारतीय जनमानसको सोच र विचार एकै खालको रहेको छ । साथै भारत र नेपालको संस्कृति, रहनसहन, भाषा, भेशभूषा पनि एकै खालको छ । नेपालमा प्रयोग गर्ने प्रोडक्ट पनि समान प्रकृतिको रहेको छ । गोदरेजले विश्वमा निर्यात हुने कुल निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा नेपालमा निर्यात गर्दै आएका छौं । नेपाल हाम्रो लागि ठूलो बजार रहेको छ । हाम्रो प्रडक्ट उच्च निर्यात हुने विश्वका देशहरूमा नेपाल माथिल्लो सूचीमा रहँदै आएको छ ।
गोदरेज भारतीय बजारमा पहिलो फ्रिज उत्पादन गर्ने कम्पनी हौं, साथै हामी चौथो ठूलो कम्पनी पनि हौं । उपभोक्ताको मागको आवश्यकताको आधार हाम्रो कम्पनीले सामानहरू उत्पादन गर्दै आएका छौं । हाम्रो भारतीय बजारमा राम्रो पकड छ ।
गोदरेज अन्य कम्पनीभन्दा के कारणले फरक छ ?
हामी सन् १८९७ मा स्थापना भएको कम्पनी हौं । १ सय २५ वर्ष पुरानो कम्पनी भएकाले गर्दा भारतमा हाम्रो ब्रान्ड स्थापित भएको छ । हाम्रो कम्पनीले उपभोक्ताको आवश्यकता र मागलाई आधार बनाएर सामान उत्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो उद्योग भारतमा नै भएकाले गर्दा यहाँ उत्पादन गरेर बिक्री–वितरण गर्न र उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गरेर बजार मागलाई धानिरहेका पनि छौं । भारतमा नै उत्पादन हुने भएकाले गर्दा उपभोक्ताले पनि घरेलु र स्थानीय प्रडक्ट भएकाले गर्दा पनि असाध्यै मन पराउनुभएको छ । हामीले उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण सामान वातावरणमैत्री रहेका छन् । हाम्रो उत्पादनमा पनि कम र बढी मूल्यको भएकाले गर्दा उपभोक्ताले आफ्नो आयस्रोतलाई हेरेर खरिद गर्न सक्ने भएकाले पनि हाम्रो उत्पादनले सबैको मन जित्न सफल भएको छ र सबैको नजरमा पर्न सफल भएका छौं ।
विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सहज छ ?
हाम्रो ब्रान्डको पहिलो प्राथमिकतामा नै उपभोक्तालाई दिएका छौं, जसले गर्दा कम्पनीले उपभोक्ताको हितका लागि नै काम गर्दै आएको छ र भावी दिनमा पनि गर्ने निर्णय गरेको छ । हामी स्थानीय उद्योग भएकाले गर्दा पनि उपभोक्ताले हाम्रो उत्पादनलाई मन पराएका छन् । १ सय २५ वर्ष पुरानो कम्पनी हो, स्थानीय मागका आधारमा उत्पादन गरेकाले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादनलाई मन पराएका छन् । त्यसैले हामी गुणस्तर उपभोक्ताको मागलाई आधारित भएर उत्पादन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेका छौं ।
तत्कालीन भारत सरकारले सन् १९९० भन्दा अगाडि विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध लगाएर स्थानीयलाई महŒव दिइएको थियो । यसले गर्दा गोदरेजजस्ता स्थानीय ब्रान्डलाई कत्तिको फाइदा भयो ?
भारतमा हाम्रो उत्पादनलाई प्रमोसन गरेका छौं । १९९० अगाडि स्थानीय र थोरै मात्र उद्योग थिए । पछि धेरै उद्योग आए अनि धेरै प्रतिस्पर्धा बढेर गएको अवस्था छ । भारतमा नै स्थापना भएका कतिपय कम्पनीहरू १९९८ पछि विदेशी ब्रान्ड पनि आए त्यसको फलस्वरूप धेरै प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ । उपभोक्तालाई पनि धेरै छनोटको विकल्प बढेर गएको अवस्था छ । उपभोक्ताका लागि विकल्प हुनु भनेको स्थानीय ब्रान्डका लागि पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन प्रविधिलगायतका कुरामा बल पुग्यो । जसका कारण हाल गोदरेजजस्ता स्थानीय ब्रान्ड आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्न सकेका छन् ।
उद्योगको स्थापना र उत्पादकत्व बढेर गएपछि पछिल्लो समय सामानको गुणस्तर भने घटेको उपभोक्तको मनोविज्ञान छ । साथै गुणस्तरीय सामान बजारमा पठाएपछि त्यो सामान धेरै समय टिक्ने भएकाले गर्दा बजारमा गुणस्तरीय सामान नपठाएको भनिन्छ नि ? किन यस्तो प्रचार भएको होला ?
त्यस्तो छैन, गुणस्तरीय सामानको उत्पादन बढेर गएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि बढेको छ भने गुणस्तर मापनको मापदण्ड पनि विकसित भएकाले गर्दा पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि बढेर गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि बनेकाले गर्दा सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सामान उत्पादन गर्न पाउने भएकाले पछिल्लो समय सामानको गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ ।
गुणस्तरीय सामान बजारमा पठाउँदा बजारमा माग बढेर कमसल सामान बजारमा पठाउँछन् भन्नु गलत हो, त्यस्तो होइन । हामी दीर्घकालीन सोचका साथ व्यवहार र सामान उत्पादन गरिरहेका छौं । हामीले उपभोक्ताको हित र मागलाई हेरेर कम सामान उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिले भारतमा पनि २५ प्रतिशतमात्र फ्रिजको प्रयोग भएको अवस्था छ । अझ ७५ प्रतिशत मानिसको पहँुचमा फ्रिजजस्ता होम अप्लाइन्सको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । हामीले अझ धेरैको पहँुचमा हाम्रो उत्पादन पु¥याउनु आवश्यक छ । उपभोक्ताको आयस्रोत र उपभोक्ताको मागलाई आधार बनाएर हामीले दीर्घकालीन सोचका उत्पादनमा जोड दिएका छौं ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालमा गोदरेजले कसरी काम गरिरहेको छ ?
हामीले दुई किसिमबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । पहिलो भनेको उपभोक्ताको मागअनुसारको सामान उत्पादन गरेर सेवा दिएका छौं । अर्को भनेको समाजमा योगदान दिएर काम गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रो उद्योगमा पनि वातावरणमैत्री बनाउनका लागि धेरैको संख्यामा रूख रोपेका छौं । हामीले वातावरणलाई हानि गर्ने ओजन तहको विनाश गर्ने खालको कुनै पनि उत्पादन गरेका छैनौं । यसको फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिङ कम गर्न केही हदसम्म भए पनि हामीले योगदान पु¥याएका छौं भने हामीले उत्पादन गरेका सबै उत्पादन वातावरणमैत्री रहेका छन् । हामी वातावरणमैत्री बन्नका लागि र हाम्रो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनौं । अन्य कम्पनीले जस्तो सस्तोमा सामान बिक्री गर्नका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गरेर वातावरणमा ह्रास आउने खालको नीति हामीले लिएका छैनौं । गुणस्तर, वातावरणमैत्री सामान उत्पादन गर्नका लागि हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ ।
वातावरणमैत्री सामान उत्पादन गर्न सम्भव छ त ?
हामीले उत्पादन गरेका सामानहरू वातावरणमैत्री बनाएका छौं । अन्य कम्पनीको तुलनामा हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरेका सामान दोब्बर बढी वातावरणमैत्री उत्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो नारा नै उपभोक्ताको मागमा आधारित सामान बनाउने र वातावरणमैत्री सामान उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सेवा र वातावरणमा जोड दिएका छौं ।
बजारमा गोदरेज कम्पनीका नयाँ उत्पादन केके आउँदै छ ?
पछिल्लो समय हामीले बजारमा ल्याउन खोजेको भनेको सेमिकन्डक्टर कुलिङ डिभाइस आउँदै छ । यो प्रडक्ट पनि वातावरणमैत्री रहेको छ । अर्को भनेको इन्टिलिजेन्स टेक्नोलोजी आउँदै छ बजारमा चाँडै । साथै हामीले भ्याक्सिनका लागि सप्लाई चेनको रूपमा काम गर्ने गरी योजना अगाडि सारेका छौं । भ्याक्सिनको प्रयोगका लागि पावर सप्लाई टुट्दा पनि करिब १२ दिनसम्म चिसो राख्न सकिने मेडिकल फ्रिज उत्पादन गरेर बजार पठाउने तयारी गरेका छौं ।
पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण उद्योगको उत्पादनमा असर गरेको छ ?
हामीलाई कोभिड–१९ का कारण तीन किसिमको असर गरिरहेको छ । पहिलो वितरणको चेन सप्लाइमा असर गरेको छ । दोस्रो काम कामदार राखेर सामान उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । अर्को भनेको मानिसको जीवनयापनमा परिवर्तन भएकाले गर्दा हाम्रा उत्पादनहरू प्राथमिकतामा नपरेको अवस्था थियो, तर विस्तारै त्यो परिवर्तन हुने क्रममा रहेको छ, अहिले आएर । मानिसले स्वास्थ्य सामग्रीमा बढी खर्च गर्न थाले त्यो समयमा घरको खर्च पनि बढेर गएको छ । अर्काे भनेको घरमा नै कार्यालयको काम गर्न अनलाइनको विकास भएपछि भने सामानको प्रयोग पनि बढेर गएको अवस्था छ । कोभिड–१९ भन्दा अगाडि २५ प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष सामानको माग बढेर गएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा भने सिङ्गल डिजिटमा ग्रोथ भएको अवस्था छ । यो वर्ष हामीले होम अप्लाइन्सको प्रयोगमा हाम्रो उत्पादनका सामग्रीको प्रयोग १० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएका छौं । कोभिड–१९ पछि जनजीवन पनि विस्तारै लयमा फिर्ता हुने क्रममा रहेको छ भने हाम्रो उत्पादनको माग पनि विस्तार वृद्धि हुने क्रममा छ । भारतपछि हाम्रो लागि नेपाल ठूलो बजार हो । नेपालमा हामीले उत्पादन गरेको फ्रिज तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । होम अप्लाइन्सको बजार भनेको हाम्रो १५ प्रतिशत हामीले ओगटेका छौं ।
कम्पनीले नेपालमा नयाँ उत्पादन तत्काल केही ल्याउँदै छ ?
नेपालमा अहिले विद्युतको खपत ४० प्रतिशतले बढेको छ । माइक्रो ओभन, फ्रिज, वासिङ मेसिनको प्रयोग बढेको छ । सरकारले पनि विद्युतीय सामानमा प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले हामीले पनि होम अप्लाइन्सको प्रयोगमा जोड दिएका छौं । विद्युतको सामानको बिक्री र विस्तार बढाउनका लागि हामीले पनि विभिन्न आकर्षक सुविधा दिएर लागिपरेका छौं । कोभिड–१९ पछि बजारमा विद्युत्का सामग्रीको प्रयोग बढेका कारण अझ ठूलो अवसर बजारमा रहेकाले गर्दा हामीले कसरी सेवा–सुविधा दिएर उपभोक्तालाई सेवा दिन सकिन्छ, त्यसतर्फ कम्पनी सधैं प्रतिबद्ध छ ।यो समाचार कारोबार दैनिक बाट लिएको हो।